Iswiidhen waa ka macaashtay soogalootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswiidhen waa ka macaashtay soogalootiga
La daabacay torsdag 13 juni 2013 kl 17.00
Dadyowga soogalootiga ahi waxay bulshada Iswiidhen soo geliyaan dhaqaale ka badan kan ay iyagu ka helaan. Sidaas waxaa laguu muujiyey daraasad caalami ah oo lagu sameeyey saameynta ay dhaqaale ahaan dadka soogalootiga ama ajnebiga ahi ku leeyihiin Iswiidhen iyo waddamada kale oo horumaray.
Ururka caalamiga ah ee iskaashiga waddamada oo loo soo gaabiyo OECD ayaa daraasaddaan siyaasadeysan ku sameeyey 27 waddan. Dalalka adduunka badankood waxay arrimaha soogalootigu ka yihiin arrin xasaasi ah, waayo waxaa jira xisbiyo doonaya in la joojiyo ama la xaddido dadka soogalootiga ah iyo dadka sharciga degganaanshaha ku qaata shaqo awgeed.
Iswiidhen waxaa ka xisbiga Isfaariye-dimoqraad oo sanooyin badan dalbayey in baaritaan lagu sameeyo kharash ku baxa dadka soogalootiga ah.
Ururka OECD wuxuu baaritaankiisa isku barbardhigay kharashyada ay ajnebigu u bixiyaan canshuur ama khidmado kale ahaan iyo kaalmooyinka ay qaataan oo ay ka mid yihiin lacagta kaalmada dadka aan shaqayn iyo lacagta hawlgabka. Markii la kala gooyey ama jaray lacagahaas waxaa bulshooyinka dalalkaas badankood ay u noqotay macaash ama faa’iido gaareysa 3000 oo euro ah oo u dhiganta 26000 oo karoon.
Haddii si gaar ah loo eego Iswiidhen, kharashka dadka soogalootiga ahi ay dowladda siiyaan ayaa ka badan dakhliga ay iyagu ka helaan dowladda. Ururka OECD wuxuu ku qiyaasay in ay bulshada iswiidhishku ka macaashto dhawr kun oo karoon sannadkiiba.
Isha: DN Ekonomi